Ukuhlasela kwamaphekula okungelona iqiniso eLondon, eManchester, eParis, eBarcelona naseRotterdam ku-23 nase-24 Okthoba? (UPDATE)): UMartin Vrijland
Ukuhlasela kwamaphekula okungelona iqiniso eLondon, eManchester, eParis, eBarcelona naseRotterdam ku-23 nase-24 Okthoba? (UPDATE))
ahanjiswe IZINDABA IZIMPENDULO	by UMartin Vrijland	ngo-22 Okthoba 2019	• 37 Amazwana
Namuhla nganikwa ividiyo lapho u-Ole Dammegard abikezela ifulege elingamanga (isiNgisi: ifulege lamanga) ukuhlaselwa kwamaphekula eLondon, eManchester, eParis, eBarcelona naseRotterdam kwe23 nase24 Okthoba (HLOLA ezansi kwendatshana). Ngichaze u-Ole Dammegard, isikhulu esihamba phambili semidiya yaseDenmark, njengesikhuthazi esiphikisayo esilawulwa ezihlokweni ezedlule. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka aveze iqiniso ukuzuza amakhredithi futhi asebenze njengetha lokuphepha kumandla okubusa. Ama-pawns alawulwayo ngezinye izikhathi angaveza izinto. Vele angikwazi ukuba nephutha, kepha ukusola kwami ​​ukuthi iDammegard iyi-pawn elawulwayo.
Uke wakuvikela phambilini owabe eyinduna yabezindaba evela kwezinye izinhlangano zabezindaba uZen Gardner. Kwavela ukuthi le Zen Gardner (ngemuva kokuthola iminyaka eminingi yokuvelela kwezinye izindlela zokuxhumana) ingahlotshaniswa nehlelo labantwana bakaNkulunkulu. In lesi sihloko en lesi sihloko Ngachaza ukuthi abesilisa abangaphambili abezindaba bahlala bekuthola kanjani ukwesekwa, bese beqa umkhumbi. Lowo uphuma ngokuzumayo abe yilungu lehlelo elikhazimulisa i-pedophilia kanti lona omunye ozibandakanya ukuzibulala uhlala emsakazweni womsakazo (ukuthi angabe esaphila futhi emuva kwesikhathi). Funda lezo zihloko ukuthola ukuthi lowo mdlalo wokuphikiswa okulawulwayo udlalwa kanjani.
IDammegard isekela imininingwane yayo ekuhlaselweni okungenzeka kwamaphekula (ngamazwi ayo) ekulandeleleni kolwazi oluthile kuhamba iminyaka. Ngeke ngikwazi ukusiza kodwa ngithole sengathi unikezwa imininingwane. Ngokwazi kwami, lokhu kusho ukuthi sesivele sinayo lapha ukuphepha kwenetha lenduna yethulwa, ukuthi ngemuva kwanoma yikuphi ukuhlaselwa abafuna iqiniso bangabamba konke ngasikhathi sinye. Yize kunjalo, uyiqhawe ebelivele likubikezela konke lokho.
Ngokwazi kwami, ngakho-ke akufanele kusimangaze ukuthi ukuhlaselwa (kwefulegi amanga) empeleni kuzofika. Ngemuva kwalokho sizobe sesithola 'umphakathi weqiniso' omusha ku-inthanethi futhi umphakathi weqiniso uzoba ngokuphelele ephaketheni lezinsizakalo, ngoba sebethule umphathi wabo othembekile (u-Ole Dammegard) kusenesikhathi. Le yindlela umdlalo weqembu eliphikisayo elidlalwe ngalo amashumi eminyaka, futhi kuzoba njalo kulesi sikhathi.
U-Ole wayezosekela imininingwane yakhe kusuka enkampanini ebizwa ngeCrisis Solutions (emergency-solutions.com). Isisu sami esiphansi sithi uthola imininingwane yakhe ezinsizakalweni ezifanayo ezilawula ukusebenza kwefulegi lamanga.
UDammegard ubikezela kusasa nosuku olulandelayo lwekusasa i-39 ehlasela emadolobheni amahlanu ashiwo. Ukusebenza kwefulegi lamanga (okwamenyezelwa njengento yokuhlaselwa kwabashokobezi) bekungaze kunikezwe negama. Kungaba nge-'Eagle Eagle '.
Ngaphezu kwalokho, kuzoba nokuzivocavoca okuhlobene nenhlekelele esakhiweni samandla enuzi enyakatho neSweden, lapho iDammegard nabo besola ukuthi kuzoba ukuhlasela kwamaphekula okungelona iqiniso. Zibonele ngokwakho ukuthi iDammegard ikuveza kahle kanjani engxoxweni engezansi njengesihloko semidiya ehlukile. Angimethembi lo mlisa, kodwa ngachaza ukuthi ngaphansi kwezixhumanisi ezimbili zewebhu ezishiwo nalokhu okushiwo ngenhla.
Uma empeleni kungeyona imisebenzi yokuthusa nje kuphela, kepha ukuhlasela okuqobo (kwamanga) kuzolandela, ngakho-ke futhi ungathola umphumela ohlukile, wokuthi izinsizakalo zizothi iziteshi ezinjenge-Ole Dammegard kanye nabezindaba abazimele banecala lazo ukuthi izinhlangano zamaphekula ziyakwazi ukuzivocavoca ngakho-ke zisebenzisa leso simo sokuzivocavoca ukwenza ukuhlaselwa kwangempela ngalezozinsuku. Ngamafuphi: yiyona ngqo leyo (elawulwa) imidiya ehlukile ebekwa icala ku-Blackjack futhi lokho kuyisizathu esihle sokususa unomphela konke okungahambi kahle ku-inthanethi. Imithombo yezindaba ehlukile-ke lapho, ngemuva kwalokho, yibona okwakudingeka bakhiphe zonke izinhlobo zokuvivinya umzimba ezihlelwe ngendlela 'eyimfihlo ngangokunokwenzeka'. Ngemuva kwalokho kungashiwo ukuthi eminye imithombo yezindaba isize "amaqembu amaphekula" ngolwazi ukuze nawo kwesokudla bakwazi ukuhlasela ngenkathi wonke umuntu ecabanga ukuthi kungukuzivocavoca.
Amaphoyisa nebutho (ngisho necala lokuhlaselwa okungelona iqiniso, okucatshangwa ukuthi kuyiqiniso; ngakho-ke ifulegi lamanga) bathi abafuna iqiniso ngamakhamera abo futhi babelana ngolwazi (bheka ucingo lukaDammegard lokuzoqopha konke), amaqembu abashokobezi asize ngisho nangokwengeziwe, okuthikameza umsebenzi wawo.
Ngabe bekungeyona into enkulu kangako ukwesabisa isimo se-911? Ngisho nangaleso sikhathi kwakukhona ukuzivocavoca okukhulu okwenzeka okuvela enhlanganweni yezokuphepha yomoya i-NORAD; abaxhumanisa i-airpace uma kwenzeka kuhlaselwa amaphekula. Ngakho-ke kungumqondo ophansi oqondile wokuthi imithombo yabezindaba ehlukile ingaqokwa njengobambisene ngokuhlanganyela uma kwenzeka kuba nethonya lamaphekula kusasa nangosuku olulandelayo. Ngemuva kwalokho imidiya ehlukile ngezambulo zayo zokuqala mayelana nokuzivocavoca kwamaphekula empeleni yenziwa ngokubambisana.
Kuzoba yisiphi isimo; (1) U-Ole Dammegard uba ngumholi omusha wenhlangano yeQiniso njengendlela yokuphepha yamandla of (I-2) ubhekene nengxenye nokubulawa kwezenzo zobuphekula ngezinsuku okwakumele azikhanyise, uma kunesidingo, yizizathu zekhofi. Kunoma yikuphi, kusazobonwa ukuthi ingabe izivivinyo noma yikuphi (ukuhlasela okungelona iqiniso) kuzokwenzeka. Kodwa-ke, kuzohambisana nokulindelwa kwe-fake flag terror wave esesivele ishiwo lapha esizeni. I-Europe ingasebenzisa i-kickstart kwizinxushunxushu ezinkulu ezihleliwe. Impela okwamanje iBrexit manje ekugcineni ibukeka sengathi igcina iphelele esigcawini. Bafuna okungaphezu nje kwesiphithiphithi; ye 'Ordo ab Chao'.
Ngakho-ke, iDammegard kungenzeka ibeke isisekelo sokwenqatshelwa okucacisiwe kwenye i-webhusayithi ehlukile nakumafilimu aqopha amabutho, amabutho kanye nabasebenza usizo.
Okwamanje asikho isibonakaliso sokuhlasela noma ukuzivocavoca umzimba. Indima kaDammegard ngakho-ke yayincane kakhulu kunalokho engangikuya kuye, futhi baphendukela kumaqhinga amadala afanayo. Akazange abe yiqhawe elikhulu, futhi akazange nabalandeli bakhe baba abangane bokusiza abashokobezi ngokuthwebula amaphoyisa namabutho. Cha, waba yindoda eyayingabuye ibukele phansi ukuthembeka kweminye imithombo yabezindaba. Ngiyaphinda futhi, ngoba lokhu kwenzeke phambilini ngokuthululwa komngani wakhe omkhulu 'uZen Gardner' njengelungu nomholi weqembu labantwana bakaNkulunkulu iminyaka; inkolo evusa ucansi nezingane. I-Ole Dammegard isivele ifakazelwe ukuthi iyi-shill futhi manje ikufakazela lokho. Lokhu kungenye yamasu wokuphepha wezinsizakalo. Baqala ama-pawns abo, akhuthaza kakhulu yonke indawo ngamanye amawebhusayithi ahlukile (nawo azithibayo). Ngemuva kwalokho bashaya izinto ngenhlamba enkulu. Ngichaze le nqubo ezihlokweni eziningi ezedlule. Ngisaqhubeka nami icala lami.
Uyazi ukuthi, abantu abanjengo-Ole Dammegard bayaqhubeka nokumemezela amaqiniso ayihafu njengemibono yobuqili Kufanele bahlaze ukucabanga okubucayi ngokubutha kuqala abalandeli abaningi bese behlazisa izinto. I-Zen Gardner nayo igcinwa ngokulawulwa. Abantu abanjengoWillem Felderhof (i-Open Mind Conference) ne-Ole Dammegard bayakujabulela ukubamba iqhaza, kepha neziza ezinjenge-Ella Ster. Ukungahlali nalawo ma-shill yiseluleko sami.
Usuku lokushicilelwa kwendatshana yangempela: I-22 Okthoba 2019 16: 47
I-2023 Unyaka owaseYurophu ehlangene noMbuso wase-Ottoman
Umkhankaso weRed Cross 'wokuhlaziya izingozi' indlela smart yokunqanda 'ukuhlukumeza amaphoyisa'?
Ukwesaba imakethe yaseStrasbourg uKhisimusi kanye nobuphekula obubalekela kubonakala sengathi kuhle kakhulu isikhathi (wamukele i-Eurogendfor)
'Ukwesaba kungumgcini' we-AIVD
Amathegi: 5, Barcelona, inkinga, bamanga, afakiwe, ifulegi, indawo yamandla enuzi, london, Manchester, ENORAD, ukuzivocavoca, Ole Dammegard, ukusebenza, EParis, Rotterdam, Ukhozi lwasolwandle, izixazululo, amadolobha, ukwesaba, ukuhlasela kwamaphekula, ifulegi lamanga, emihlanu, Sweden
22 Okthoba 2019 ku-17: 25
"Yini engingayenza?" Ngakho-ke ungalandeli izeluleko zeDammegard futhi ikakhulukazi ugweme izindawo eziyizimbiza bese uthengela abanye ukudla okwenziwe ngamakhekhe namanzi okuphuza amasonto ambalwa.
Ngakho-ke ungacabangi ukuthi ungafinyelela impumelelo enkulu ngokuthwebula. Lokho kuyisicupho sokuthola ukwenqatshelwa kulokho. Ngakho-ke isiluleko sami: ungalaleli lokhu kukhanya kwamandla u-Ole Dammegard.
22 Okthoba 2019 ku-18: 16
Abafuna iqiniso maduze nje (bayobonga - izinsizakalo zemfihlo - Ole Dammegard) abashokobezi abasha. Basizile amaqembu abashokobezi ukuthi athole imininingwane ngokukhipha izinsuku nezindawo zokuzivocavoca futhi bathumela abantu emzileni ukuthi bathathe amafilimu namabutho (bavumela abashokobezi ukuthi babaphendule futhi).
Phawula amazwi ami!
22 Okthoba 2019 ku-18: 02
I-Grapperhaus ayikwazi ukulinda ...
22 Okthoba 2019 ku-18: 42
Ngabe ngizwa lapha "iba Inofizielle Mitarbeiter"? Ikhumbuza kancane ngaleyo nkathi ye-DDR ..
Lowo mbukwane ovela kwaGrappermaker ungikhumbuza ngokuqinile ngenkathi ethile, kodwa ngizobe ngibe yisithupha nekota okungalungile.
22 Okthoba 2019 ku-19: 40
kungani enza izinto zibe nzima kangaka, anikeze uHerr Oberst kanye noNgqongqoshe wakhe uSpanatssicherheit isandla esisizayo ... ngoba ngokubambisana siqinile 😀
3 November 2019 ku-17: 03
Asikhuphi ihaba kancane le-salmon ne-martin manje ... Isimo samaphoyisa hahaha
22 Okthoba 2019 ku-21: 33
Bheka uphawu olungakwesokudla kwevidiyo ka-Ole. Kungani isibonakaliso esingaka uma uzimemezela ofuna iqiniso. Ngabe-ke kuyadingeka ukuhlwanyela ukungabaza?
22 Okthoba 2019 ku-22: 37
Ngokufanele abantu be-marcos uphawu olungabukeli phansi, luyisihluthulelo somyalezo ekuqaleni.
Kepha kungani, ngokwesibonelo, kungani u-Ella agxila noma efuna ukwazi ukungasabalalisi ifilimu iMartinVrijland kwiwebhusayithi yabo evela kwi-pegida yokubonakalisa i-Pex, kodwa kusuka kuleyo mpisi egqoke okwezingubo zezimvu u-Olle Damnguard.
Kungani izimemezelo zikaMartin Vrijland zingakaze zithathwe kalula kwa-OM, ngani? ngoba le blogger ayihloliwe, ngakho-ke abantu.
I-Dammgard ekhuluma futhi eshaya futhi ayikaze isekele lutho ngezinto ezibonakalayo ezinzima. Yonke into iyifulegi yamanga ngenkathi i-80 iyi-% hoax. Abantu abanjengo-Olle Dammgard ngisho nohlobo olubi kakhulu, izigebengu ezingaphansi kwenhlangano engaphansi komhlaba (ukumelana nokulwa) ukubeka kanjalo, isosha eligqoke umfaniswano wethu emuva ukudubula.
Isho okufanayo nokuphikiswa okulawulwayo i-WantToKnow, EllaStar, Niburu.co nezinye eziningana.
Kungu-pawn efana ne-Icke engalawulwa. Uma wenza izitatimende ezesabekayo nge-CIA futhi kungaphezu kokufanele okulindele ukugogeka, ungacabanga, cha, hhayi u-Olle, u-Olle angaqhubeka nokuqhubeka nokugcina lesi sixuku esisavukile sesixuku, umgibeli ophonswe kahle obiza abantu abanjengo-Olle Damm Guard , Peck onezimpaphe eziningi, angalaleli
22 Okthoba 2019 ku-22: 50
Ngeke kwamukelwe abaningi ukuthi umuntu oveza ngokuqondile izinkulumo ze- "deepstate" mayelana ne-PsyOps ne "Inkinga, Ukuphendula, Isixazululo" ngokwayo kungaba yimbangi yamandla.
Ukuze ukwazi ukubona ukuthi amandla okubusa ayazi ukuthi ungabamba abaphikisi ngamandla akhe kuphela uma uzibeka njengomholi weqembu eliphikisayo.
Ukuphikiswa okunjalo okuphonswe kahle kufana ne-chameleon ethatha umbala ofanayo nokunambitha njengabantu abacabanga ngempela ngokukhululeka. Lokho kwenza kube nzima kakhulu kimi, ngoba umuntu ofana noDammegard, kodwa noRobert Jensen bazama ukukopisha lokho impela engikulethayo. Isiza sami kuphela esithulisiwe, sihlolwe yonke indawo futhi sakhiwe. Ngokuphambene nalokho, bathola ukunakwa okugcwele.
Isu eliyinkimbinkimbi kakhulu futhi elihlakaniphile.
22 Okthoba 2019 ku-22: 58
Kuhlanjululwe kakhulu, leyo psychology eningi ibilokhu iqhubeka amashumi eminyaka, mhlawumbe isebenza kubantu abaningi, kodwa hhayi wonke umuntu nje, futhi iya ngokuya yanda.
22 Okthoba 2019 ku-23: 39
Ngendlela, ama-xandernieuws ayekhohliwe, iphephandaba le-semi-telegraph noma abaphikisi abalawulwa kakhulu njengabanye baningi.
Kubukeka sengathi wonke lawo mawebhusayithi kumele axhumane ngokuhlanganyela izindaba ze-Olle Dammegard. Akukubi kangako kithina sonke ukuthi akuphelanga yini kwi-radar yemvula. Mhlawumbe lokho kuzofika, "ukuhlaselwa kwe-radar", kufanele ube yilungu leXandernieuws noma iTelegraaf noma i-ellastar
Ngakho-ke kufanele kukhishwe insimbi ye-alamu.
Ngoba ake sithi u-Ole uzolunga, khona-ke usezunguleni, ake sithi akulungile lapho lokho kubizwa ngokuthi ukuvuvukala noma ukwethusa, kuhle konke okuphathelene neminye imithombo yezindaba, kepha u-Ole uzokwehla
futhi okunye kuyaqhubeka ngoba bangumthungi uqobo.
Psychology enkulu yezixuku eziphaphayo
22 Okthoba 2019 ku-23: 44
Well .. UDe Telegraaf udlala indima ephambili ye-PsyOp futhi amawebhusayithi aphikisayo alawulwayo adlala indima yamanetha okuphepha.
Amanetha okuphepha athatha umbala weVrijland njengamachilo.
Ukuvalwa kwe-Facebook neminye imithombo yezokuxhumana kwenza konke. Iziza ezihlukile ezilawulwayo ziphephela i-pawns yezokuphepha futhi ithule i-Vrijland ife.
Ngaphandle kwalapho manje e-Xander ... ngoba manje isixhumanisi esineGeenstijl neJensen kumele senziwe ngokuzuma, ngoba ngaso sonke isikhathi ngidalula lezo zingosi ze-2.
23 Okthoba 2019 ku-05: 33
Ngiyaqonda futhi ngikuqonda kahle kakhulu lokho okuchazayo ngenhla. Kodwa-ke, okusangigcina ngixakekile ngumbuzo wokuthi kungani le sayithi isebenzisa uphawu olujwayelekile. Inani labantu ababona ngalolu phawu luyakhula, kungani-ke leliqhinga. Uyini umbono wakho ngemuva kwalokhu?
23 Okthoba 2019 ku-07: 14
Ngiphinde ngabona ukuthi uMartin Vrijland kukhulunywa ngaye ekuphefumuleni okulingana noJensen futhi akukho sitayela. Bacabanga ngempela ukuthi wonke umuntu uyahlonipha ukuthi angazitholi.
Kuyangishaya futhi ukuthi phakathi kwezimpendulo kuma-xandernieuws, ngokwesibonelo, kunezimpendulo eziqonda isimo sangempela. Manje i-oyili encane iyashwabana, kepha iya ngokuya ikhula ibe nkulu. Bangabamba abakufunayo kepha sekudlule isikhathi.
Iqiniso selivele linqobile.
22 Okthoba 2019 ku-22: 21
Ngabe u-Ole angafunda naye kule webhusayithi? Ngomzuzu i-14: i-21 ithi, "Kususelwa enkingeni yakudala, Reaction, Solution. Futhi ukuphinda lokhu amahlandla ambalwa.
Singaqala ukuvota lapha. Yisiphi isimo esichazwe nguMartin esizogcwaliseka? 😉
Ngokwami, ngicabanga ukuthi isimo se-2 sifiselelwa kakhulu iskripthi. Iqembu elikhudlwana likhishwa ekudlaleni ngesikhathi esisodwa. Izinkomba ziya ngokuya zenziwa kokunye okuphathelene nabezindaba kwezepolitiki nakwabezindaba abahamba phambili. “Umzuzu omuhle” wokuguqula leyo midiya ehlukile ibe ihembe lakhe.
Kepha uma izinto zingahambi njengoba behlelile, isimo se-1 empeleni siyiplani elihle lokusekelayo. Kulokhu, lokhu kuhlasela okubikezelwe akudingeki nokuthi kwenzeke. Uma kungenzeki lutho, u-Ole uphakanyiselwa ngokuzenzakalelayo enhlalakahleni eyazi konke.
23 Okthoba 2019 ku-04: 21
Akukona ukuhlakanipha ukufakwa konke futhi ungakuvezi lokhu. Linda kuze kube yilapho lonke uphenyo seluphothuliwe bese ulubeka ku-inthanethi, ukuze mhlawumbe udaba olusemthethweni lungasebenzi?
23 Okthoba 2019 ku-08: 32
Cha, ngoba kucatshangelwa ukuthi impikiswano isetshenziswa ukuthi abashokobezi (uma kwenzeka kwenzeka) babenokuthola idatha enkulu..or: imininingwane engaqoqwa kusuka kumafoni ngemvume yobumfihlo (ngemuva kokufaka Izinhlelo zokusebenza).
Ngamanye amagama: izinhlelo zokusebenza eziningi zikuvumela ukuthi ufinyelele kwisitoreji sakho sendawo futhi ubuke leyo datha, ngakho-ke amaseva amakhulu edatha nawo anezithombe namavidiyo wakho.
Uma "amaphekula" angafinyelela leyo datha enkulu (amaseva wokugenca), azoba nezithombe namavidiyo akho.
23 Okthoba 2019 ku-05: 40
23 Okthoba 2019 ku-08: 48
U-Ole uhlaselwa kakhulu..aldus Ole. Kungumsebenzi wakhe ukukuguqula ngokwejwayelekile lokho. Ngamafuphi, abafuna iqiniso bajwayele ukucindezelwa ngeDammegard.
Vele abaningi bazogijima ngemuva kwale inethi yezokuphepha, kepha konke kuyinkimbinkimbi kakhulu kimi.
Njengomuntu ongenahlombe, u-Ole Dammegard manje uzosebenzisa leyo mibhalo.
23 Okthoba 2019 ku-08: 49
U-Alfred Lambremont Webre ... enye indlobane ephikisayo elawulwa okumnandi
23 Okthoba 2019 ku-08: 58
U-Ole angakwazi ukuhambahamba nge-motorhome ebizayo futhi athole ezameva ezimnandi kakhulu.
Indima yakhe: ukujwayela ingcindezelo (futhi ikakhulukazi 'wesabe' ..) ngoba akuyena wonke umuntu oyiqhawe elinjengo-Ole).
23 Okthoba 2019 ku-09: 42
Sawubona Ole! Mhlawumbe kufanele usubeke isisekelo somthetho omusha ovimbela imihlangano emincane ngaphandle kwemvume?
23 Okthoba 2019 ku-06: 05
Ukucabanga ukuthi kulungile ukuthi u-Ole ungukuphikiswa okulawulwayo. Uyakwazi yena uqobo? Ingabe uyingxenye yesimo esijulile noma uyisisulu sokukhohliswa?
23 Okthoba 2019 ku-08: 43
Akabukeki njengesisulu ucabanga ukuthi? Kufanele ubheke ngamehlo kuphela.
23 Okthoba 2019 ku-10: 54
Ngabe umdlalo uzoqala manje?
23 Okthoba 2019 ku-17: 13
Abantu abaningi abacabanga ukuthi i-Ole Dammegard iyimpahla ye-CIA:
23 Okthoba 2019 ku-22: 32
Hhayi-ke kwakuwusuku olwesabekayo lwamaphekula Ole!
Ngakho shill uwele kubhasikidi
Hlukana nayo..serve..hayi bump back!
23 Okthoba 2019 ku-22: 33
24 Okthoba 2019 ku-12: 17
Inombolo kuphela ye-39 efanayo. (Ole)
24 Okthoba 2019 ku-16: 33
Futhi kuPauw, kunjalo, ukulawulwa okwengeziwe kwaxoxwa ngokushesha izolo ..kulandela izidumbu ze-39 elolini ..
24 Okthoba 2019 ku-16: 35
Imizimba ye-39 ayifani nokuhlaselwa kwe-39, kepha ngayibona ngokushesha ..
25 Okthoba 2019 ku-19: 25
30 Okthoba 2019 ku-05: 54
30 Okthoba 2019 ku-12: 31
Kuhle! Sivimbele ukubonga ku-Ole!
Gcina it up Ole!
Ngibonga u-Ole, i-NATO ihlangane ngokuphuthumayo ukukhipha ifulegi elingamanga!
Wow WauW WauWW !!! U-Ole uyindoda eyiqhawe nje!
Isikhulu esikhulu !!
"Imihlangano ephuthumayo eBrussels!" Imbongolo yami
1 November 2019 ku-00: 09
Ngabe ukufanekisela kanye / noma amasu we-NLP kuzohamba kangakanani kumavidiyo anjengalawa?
Ngikubuza lokho ngoba ngiyabona ukuthi ngiphazanyiswa yisikhafu sika-Ole esingikhumbuza isikhumba senyoka. Ngiphinde ngibone umbono ka-Ole kule vidiyo. Usondele kakhulu futhi ubheka phansi abalaleli.
1 November 2019 ku-00: 59
lawo amasu anganakwa asetshenziswayo
30 Okthoba 2019 ku-06: 09
Ukuvuselelwa ngaphezulu, imizuzu ye-33.39 lapha esikrinini, abantu abajabulisayo.
« Umndeni we-PsyOp we-deepfake 'ghostOp ngokususa yonke inkululeko yakho kanye nesingeniso' samaphoyisa acabangayo '(ingxenye ye-3)
Ukubulawa okuphindwe kabili kukaGina noMarinin ePathé cinema Groningen »
Ukuvakashelwa okuphelele: 14.027.615